News & Events « One Dollar Fund – Myanmar (ODF Myanmar)
2014 September & October Donation Plan
As the venue for 2014 September & October donation (47th donation) of ODF Myanmar, we have chosen “Lo Ta Ya” monastic education center in Hlaw Kar, Shwe Pyi Thar Township, Yangon.
Beingaboys school, the school is taking care of not only basic needs but also educational needs of Buddhist novices and orphans.
Therefore, we would like to notify our donors that ODF Myanmar will contribute donations for students at “Lo Ta Ya” monastic education center as our 47th donation plan and donations will be accepted till 2-November-2014. Donations can be made through official ODF volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers) or to ODF Bank Accounts (Singapore & Myanmar). For detailed information, please visit our website http://odfmyanmar.org/donate/. Thanksalot to our donors and friends!
ODF Myanmar ၏ ၂၀၁၄ စက်တင်ဘာနှင့် အောက်တိုဘာ အလှူ (၄၇ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ)အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ လှော်ကားရှိ လိုတရ ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းအား လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
လက်ရှိတွင် စာသင်သား ကိုရင်နှင့် ကျောင်းသား စုစုပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တို့နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့နှင့် အလှမ်းမဝေးသော်လည်း အလှူရှင်များ အရောက်အပေါက်နည်းသောကြောင့် ကျောင်းသားများ၏ စားဝတ်နေရေးတွင် အကူအညီလိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် လိုတရ ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းရှိ စာသင်သား ကိုရင်များနှင့် မိဘမဲကျောင်းသားလေးများအတွက် ODF Myanmar အလှူရှင်များမှ တတ်အားသရွေ့ ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အလှူငွေများကို ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကောက်ခံသွားမည့်အကြောင်းကိုလည်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ အလှူငွေများကို ODF volunteer (http://odfmyanmar.org/volunteers) များထံသို့ ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ ODF ဘဏ်စာရင်းများသို့ လည်းကောင်း လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို http://odfmyanmar.org/donate/ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အလှူရှင်များအားလုံးနှင့်တကွ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများအားလုံးအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
2014 May & June Donation Plan
As the venue for May & June, 2014 donation (45th monthly donation) plan, we would like to announce that ODF Myanmar has planned to contribute for constructinganew school library at “Aung Pan Myaing” monastic education centre from Aye Ywar Lay Village, Nyaung Tone Township, Ayeyarwaddy Division .
“Aung Pan Myaing” monastic education centre provides education to primary and secondary students and therefore it isaplace on which students from nearby villages are dependent.
Transportation to the school is difficult and during the rainy season when the transportation can be made only by boat, students from nearby villages have to go to school, onadaily basis, by boat which would take about 30 minutes.
ODF Myanmar donated to that school in 2013 and currently construction project has already been started with the fund received from the previous donation.
Therefore, we would like to announce this news and welcome our friends and donors, who are enthusiastic to offer hands, to cooperate with us to contribute for constructinganew school library at “Aung Pan Myaing” monastic education centre. We would also like to encourage our donors to offer helping hands in the same way as in previous donation events which were accomplished by altruism and effort of our generous donors.
Please be informed that donations will be collected till 5-July-2014. Donations can be made through ODF volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers/) or to ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar). Detailed information for bank accounts and addresses can be found at our website http://odfmyanmar.org/donate.
ODF Myanmar (One Dollar Fund – Myanmar) ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလနှင့် ဇွန်လ အလှူ (အကြိမ် ၄၅ မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ အေးရွာလေးကျေးရွာရှိ “အောင်ပန်းမြိုင်” ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာသင်ကျောင်းတွင် ကျောင်းစာကြည့်တိုက်အဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
အဆိုပါကျောင်းသည် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများအား ပညာသင်ကြားပေးလျှက်ရှိပြီး အနီးတဝိုက်ရှိ ကျေးရွာများမှ အားကိုးအားထားပြုနေရသော ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းမှာ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ခက်ခဲပြီး မိုးတွင်းကာလ ရေလျှံသောအချိန်များတွင် ရေလမ်းဖြင့်သာ သွားလာနိုင်သဖြင့် အနီးတဝိုက်ကျေးရွာများရှိ ကလေးငယ်များမှာ ကျောင်းသို့ လှေဖြင့် မိနစ်(၃၀)ခန့် နေ့စဉ် သွားရောက်ရပါသည်။
ODF Myanmar မှ အဆိုပါကျောင်းသို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ထိုလှူဒါန်းခဲ့သော အလှူငွေဖြင့် ကျောင်းစာကြည့်တိုက် စတင် ဆောက်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျောင်းစာကြည့်တိုက်အဆောင် ပြီးမြောက်စေရန်အတွက် အထောက်အပံ့ လိုအပ်လျက်ရှိသော ”အောင်ပန်းမြိုင်” ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာသင်ကျောင်းသို့ တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှ အားဖြည့်ကူညီလိုသူ စေတနာရှင် မိတ်ဆွေများနှင့် အလှူရှင်များကို မိမိတို့ ODF Myanmar နှင့် လက်တွဲ၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလနှင့် ဇွန်လ အလှူတွင် တတ်စွမ်းသလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ အလှူရှင်များ၏ စေတနာအား၊ လုပ်အား အကူအညီတို့ဖြင့် အောင်မြင်စွာလှူဒါန်းခဲ့ပြီးသော ယခင်အလှူများအတိုင်း ဆက်လက်လှူဒါန်းကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
အလှူငွေများကို ၂၀၁၄ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကောက်ခံသွားပါမည်။ အလှူငွေများကို ODF Volunteers http://odfmyanmar.org/volunteers/ များမှ ဖြစ်စေ၊ ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar) သို့ ဖြစ်စေ လှူဒါန်းနိုင်ပြီး ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ်ကို http://odfmyanmar.org/donate တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
2014 March & April Donation Plan
Dear venerable donors,
We would like to announce that ODF Myanmar has chosen No.(1), Post Primary School, Suu Tat which is located at Suu Tat Village, Khin Oo Township, Mandalay Division as the venue for March & April, 2014 donation (44th monthly donation) plan.
Being located at Suu Tat Village which is 7-mile away from Shwebo, the school was promoted toajoint secondary school two years ago.
According to 2013-2014 academic calender, there are total 110 students (Kindergarten – 10, First Standard – 10, Second Standard - 12, Third Standard - 15, Fourth Standard – 15, Fifth Standard – 12, Sixth Standard – 12) at the school and it is enquired that aids in school furniture and stationary for kids are needed.
Due to infertile farmland and difficult transportation resulted by lackingamain village road for motor vehicles to travel, Suu Tat Village isaslow-developing area.
Therefore, we are announcing this news so that our friends and donors, who are enthusiastic to offer hands, would cooperate with us in contributing to No.(1), Post Primary School, Suu Tat which is located at sucharemote area and needs proper supports. We would also like to encourage our donors to offer helping hands in the same way as in previous donation events which were accomplished by altruism and effort of our generous donors.
Please be informed that donations will be collected4May 2014 (Sunday). Donations can be made through ODF volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers/) or to ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar). Detailed information for bank accounts and addresses can be found at our website http://odfmyanmar.org/donate.
ODF Myanmar (One Dollar Fund – Myanmar) ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ နှင့် ဧပြီလ အလှူ (၄၄ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် မန္တလေးတိုင်း၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ ဆူးတပ်ရွာရှိ အမှတ်(၁)၊ မူလတန်းလွန်ကျောင်းသို့ လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
အဆိုပါကျောင်းသည် ရွှေဘိုမြို့မှ ၇ မိုင်ကွာဝေးသော ဆူးတပ်ရွာတွင် တည်ရှိပြီး ယခုအခါ တွဲဖက်အလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်မှာ ၂နှစ်ရှိပြီဟု သိရပါသည်။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်အတွင်း မူလတန်းမှ ဆဋ္ဌမတန်းအထိ ကျောင်းသားကျောင်းသူ စုစုပေါင်း ၁၁၀ယောက် (မူလတန်း – ၃၄ယောက်၊ ပထမတန်း – ၁၀ယောက်၊ ဒုတိယတန်း – ၁၂ယောက်၊ တတိယတန်း – ၁၅ယောက်၊ စတုတ္ထတန်း – ၁၅ယောက်၊ ပဉ္စမတန်း – ၁၂ယောက်၊ ဆဋ္ဌမတန်း – ၁၂ယောက်) ပညာသင်ကြားလျက်ရှိပြီး ကျောင်းတွင်း ပရိဘောဂများနှင့် ကလေးများအတွက် စာရေးကိရိယာများ အကူအညီလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဆူးတပ်ရွာသည် စိုက်ပျိုးမြေမဖြစ်ထွန်းခြင်း၊ မော်တော်ကားသွားနိုင်သော ရွာထွက်လမ်း မရှိ၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းတို့ ကြောင့် ဖွံ့ ဖြိုးမှုနှေးကွေးသော ဒေသတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
သို့ ဖြစ်ပါ၍ ယခုကဲ့သို့ ဝေးလံသောအရပ်ဒေသရှိ အထောက်အပံ့လိုအပ်လျက်ရှိသော အမှတ်(၁)၊ မူလတန်းလွန်ကျောင်း၊ ဆူးတပ်သို့တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှ အားဖြည့်ကူညီလိုသူ စေတနာရှင် မိတ်ဆွေများနှင့် အလှူရှင်များအား မိမိတို့ ODF Myanmar နှင့် လက်တွဲ၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ အလှူတွင် တတ်စွမ်းသလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ အလှူရှင်များ၏ စေတနာအား၊ လုပ်အား အကူအညီတို့ဖြင့် အောင်မြင်စွာလှူဒါန်းခဲ့ပြီးသော ယခင်အလှူများအတိုင်း ဆက်လက်လှူဒါန်းကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
အလှူငွေများကို ၂၀၁၄ မေလ ၄ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကောက်ခံသွားပါမည်။ အလှူငွေများကို ODF Volunteers http://odfmyanmar.org/volunteers/ များမှ ဖြစ်စေ၊ ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar) သို့ ဖြစ်စေ လှူဒါန်းနိုင်ပြီး ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ်ကို http://odfmyanmar.org/donate တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
2013 – November & December Donation Event
2013 - November & December Event
We are very glad to announce that we received 1521 SGD (1,163,500 Kyats) for November & December, 2013 (42nd monthly donation). The collected money has been donated to “Mi Ba Metta” Orphanage, Aye Tha Yar Township, Shan State on 25 February 2014.
That orphanage was established by Abbot U Kuwi Nanda in 2010, the place provides food, shelter and education to orphans from nearby places. Two teachers are in charge of teaching 40 kids, ranging from kindergarten to 11th grade level at the orphange.
All our donors and friends, who cooperated with us in contributing to suchaplace which provides the basic and education supports to the needy, are greatly appreciated. We also share our merits to everybody. Thank you!
ODF Myanmar (One Dollar Fund – Myanmar) ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာနှင့်ဒီဇင်ဘာ အလှူ (၄၂ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ အေးသာယာမြို့နယ်အတွင်းရှိ မိဘမေတ္တာ မိဘမဲ့ဂေဟာအတွက် အလှူခံခဲ့ရာ အလှူငွေ ၁၅၂၁ ဒေါ်လာ (၁,၁၆၃,၅၀၀ ကျပ်) လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ အလှူငွေများကို အလှူရှင်များကိုယ်စား ၂၀၁၄ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဆရာတော် ဦးကုဝိနန္ဒမှ စတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီး အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ မိဘမဲ့ကလေးများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်၍ ပညာသင်ကြားပေးနေသော အဆိုပါ ကျောင်းတွင် ဆရာ၊ ဆရာမ နှစ်ဦးမှ တာဝန်ယူ၍ မူကြိုမှ ဒဿမတန်းအထိ ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း ၄၀ အား ပညာသင်ကြားပေးလျှက် ရှိပါသည်။
မိဘမဲ့ကလေးများ၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် ပညာရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးနေသော မိဘမေတ္တာ မိဘမဲ့ကျောင်းအတွက် စေတနာထက်သန်စွာ လှူဒါန်းကူညီကြသော မိတ်ဆွေများနှင့် အလှူရှင်များကို အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ မိမိတို့၏ အလှူဒါနကိုလည်း မိတ်ဆွေအားလုံးကို အမျှပေးဝေပါသည်။ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
2013-October Donation Event
We are very pleased to inform you that we received 1161.60 SGD (915,000 Kyats) for October, 2013 (41st monthly donation). On 2013-Dec-08, on behalf of the donors, we have donated the collected money to “Shwe Guu Lay Mahar Thukha” monastic education centre from Bago Township, Bago Division.
“Shwe Guu Lay Mahar Thukha” monastic education centre is the place which provides free education not only for novices and nuns but also for students from nearby areas.
“Shwe Guu Lay Mahar Thukha” monastic education centre is the place which provides free education not only for novices and nuns but also for students from nearby areas. At the centre, thirty teachers (primary, secondary and high level) are in charge of teaching from kindergarten to 11th grade level and for 2013-2014 academic year, the total number of learners is 943, including novices, nun and students.
All our donors and friends, who cooperated with us in contributing to suchaplace which provides free education for learners, are greatly appreciated. We also share our merits to everybody. Thank you!
ODF Myanmar (One Dollar Fund – Myanmar) ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ အလှူ (၄၁ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် ပဲခူးတိုင်း၊ ပဲခူးမြို့ နယ်အတွင်းရှိ ရွှေဂူလေးမဟာသုခ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာသင်ကျောင်းအတွက် အလှူခံခဲ့ရာ အလှူငွေ စုစုပေါင်း ၁၁၆၁.၅၀ ဒေါ်လာ (မြန်မာကျပ်ငွေ ၉၁၅,၀၀၀ ကျပ်) ရရှိခဲ့ပါသည်။ အလှူငွေများကို အလှူရှင်များကိုယ်စား ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါကျောင်းသည် သာမဏေများ၊ သီလရှင်များကို သာမက အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကိုပါ အခမဲ့ ပညာသင်ကြားပေးနေပါသည်။ မူလတန်းပြ၊ အလယ်တန်းပြနှင့် အထက်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမပေါင်း (၃၀)မှ တာဝန်ယူ၍ သူငယ်တန်းမှ ဒဿမတန်းအထိ ပညာသင်ကြားပေးလျှက်ရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်တွင် သာမဏေ၊ သီလရှင်၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း (၉၄၃)ယောက် ရှိပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ အခမဲ့ပညာဒါန ပေးဝေလျှက်ရှိသော ရွှေဂူလေးမဟာသုခ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာသင်ကျောင်းအတွက် ဝိုင်းဝန်းကူညီ လှူဒါန်းကြသော မိတ်ဆွေများနှင့် အလှူရှင်များအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ မိမိတို့၏ အလှူဒါနကိုလည်း မိတ်ဆွေအားလုံးကို အမျှပေးဝေပါသည်။ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
2013-Aug&Sep donation event
2013-August & September Event
It is with great pleasure to announce that the total amount of 1750 SGD (1,365,000 Kyats) and 200 USD was collected for the donation plan of August & September, 2013 (40th monthly donation) which was proposed to contribute to “Aung Pan Myaing” monastic education centre from Aye Ywar Lay Village, Nyaung Tone Township, Ayeyarwaddy Division. Moreover, we received 15 children’s poetry books named ”Tha Tha Yar Yar Doe Kabar” which were published by ODF Myanmar and donated by U Aung Myint Htwe and Daw Cho Yin family for the library at monastic education center.
Transportation is difficult and during the rainy season when the transportation can be made only by boat, students from nearby villages have to go to school, onadaily basis, by boat which would take about 30 minutes.
Therefore, we would like to express our warm gratitude to all the donors who contributed as much as they could, ODF volunteers who helped around and our friends who managed the donation plan which was intended to contribute toaneedy place like “Aung Pan Myaing” monastic education centre. May all be healthy and wealthy for doing suchagood deed!
ODF Myanmar (One Dollar Fund – Myanmar) ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလ အလှူ (အကြိမ် ၄၀ မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ အေးရွာလေးကျေးရွာရှိ အောင်ပန်းမြိုင် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာသင်ကျောင်းအား လှူဒါန်းရန်အတွက် စုစုပေါင်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၇၅၀ (မြန်မာကျပ်ငွေ ၁,၃၆၅,၀၀၀ ကျပ်) နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ အပြင် ODF Myanmar အဖွဲ့မှ ထုတ်ဝေသည့် “သာသာယာယာ တို့ကမ္ဘာ” ကလေးကဗျာစာအုပ် (၁၅)အုပ်အား အလှူရှင် ဦးအောင်မြင့်ထွေး + ဒေါ်ချိုယဉ် မိသားစုမှ ကျောင်းရှိ စာကြည့်တိုက်အတွက် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ခက်ခဲပြီး မိုးတွင်းကာလ ရေလျှံသောအချိန်များတွင် ရေလမ်းဖြင့်သာ သွားလာနိုင်သဖြင့် အနီးတဝိုက်ကျေးရွာများရှိ ကလေးငယ်များမှာ ကျောင်းသို့ လှေဖြင့် မိနစ်(၃၀)ခန့်နေ့ စဉ် သွားရောက်ရပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အထောက်အပံ့မပြည့်စုံသော အောင်ပန်းမြိုင် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာသင်ကျောင်းအတွက် တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြသော အလှူရှင်များ၊ ဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့ကြသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ အလှူဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲပေးခဲ့ကြသော မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ လှူဒါန်းရသော အကျိုးအားကြောင့် စေတနာရှင်အပေါင်း ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
2013-May donation event
We are very glad to announce that we received 1570 SGD for 2013-May (37th monthly) donation plan, “Yadanar Mon Youth Academy” monastic education centre located in Taung Yin, Kyaukphyu township, Rakhine State, Myanmar. We have donated the collected money to Sayataw Dr. U Thupiya, Mahamuni Buddhist Society (http://www.mahamunibuddhistsociety.com).
“Yadanar Mon Youth Academy” was established as an official monastic education center in 2011. Under the guidance of the Venerable Sayadaw U ZaWaNa , the school is the place where the nearby poor children are being provided with educational aids. For 2012-2-13 academic year, the school took care of total 72 students- 37 for primary, 28 for secondary and 8 for high school.
Therefore, we would like to convey our gratitude to our friends and donors, who offered hands and contributed for 2013-May donation. May all be healthy and wealthy!
ODF Myanmar ၏ ၂၀၁၃ မေလ အလှူ (၃၇ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူုမြို့နယ်၊ တောင်ရင်းရပ်ကွက်ရှိ ရတနာမွန် လူငယ်အကယ်ဒမီဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းအတွက် အလှူခံခဲ့ရာ အလှူငွေ စုစုပေါင်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၅၇၀ ရရှိခဲ့ပါသည်။ အလှူငွေများကို ရတနာမွန် လူငယ်အကယ်ဒမီကျောင်းကိုယ်စား စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂယာသုခါရမကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဦးသုပီယ ထံသို့ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်မှ စတင်၍ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ထားသော အဆိုပါကျောင်းသည် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်တွင် ဆရာမ ၄ ယောက်ဖြင့်၊ မူလတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူ ၃၇ ယောက် ၊ အလယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူ ၂၈ ယောက် ၊ အထက်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသား ၈ ယောက်၊ စုစုပေါင်း ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၇၂ ယောက်အား ပညာသင်ကြားပေးနေပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် အဆိုပါလိုအပ်ချက်များအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဝိုင်းဝန်းကူညီ လှူဒါန်းကြသော မိတ်ဆွေများ ၊ အလှူရှင်များအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ လှူဒါန်းရသော အကျိုးအားကြောင့် အလှူရှင်အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။